Home Wararka Farmaajo oo bilaabay inuu sameeyo balanqaadyo been abuur ah oo la xiriira...
Farmaajo oo bilaabay inuu sameeyo balanqaadyo been abuur ah oo la xiriira Mushaarka, Gunnada & Raashinka Ciidanka Booliiska
Farmaajo oo isticmaalayo kooxaha u adeega oo uu horeey Wasiir Beyle ayaa bilaabay inuu sameeyo balanqaadyo been abuur ah oo la xiriira kordhinta Mushaarka, Gunnada & Raashinka Ciidanka BooliiskaWasiirka. Iyada oo waqtigii dowlada uu ka tirsan yahay uu gabaabsi yahay ayaa Beyle sheegay in Ciidanka Booliiska Soomaaliya loo sameynayo mushaar kordhin uusan shaacin waqtiga ay dhaceyso & inta la gaarsiinayo si loogu abaalgudo doorka uu ciidankaas ka qaatay Nabadgalyada Doorashada.
Beyle, oo kursigiisii xildhibaanimo waayay ayaa hada sheegaya in uu sameeyano lacag kordhin dhanka mushaarka, raashinka iyo Gunnada ay qaataan, Haddii qorshahaan uu hirgelo dhiiragelin xooggan ay u tahay Ciidamada Booliiska oo ka shaqeynaya ammaanka.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa ciidanka Booliiska ka dalbaday in uu xoojiyo mas’uuliyadda ka saaran ilaalinta nabadgalyada & kahortagga wax weliba oo dhibaato ku ah Shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleAl Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka masuul katirsan dowladda Kenya
Next articleSafaaradda Soomaaliya ee Serbia oo gurmad u fidisay Soomaali ku xayirnayd Ukraine
Masuuliyiin xilka kahaya DFS oo Dowlado shisheeye u adeegsana kala qeybinta...